Matamela Cyril Ramaphosa (wuxuu dhashay 17 Nofembar 1952) waa Siyaasiyiin Koonfur Afrika ah iyo Madaxweynaha shanaad ee Koonfur Afrika. Waxa uu noqday madaxweynihii is casilay Jacob Zuma. Madaxweynihii hore ee Koofur Afrika wuxuu ka soo shaqeeyay madaxweyne ku xigeenka koonfur Africa laga soo bilaabo 2014 ilaa 2018. Waxaa loo doortay madaxweynaha ANC National Congress (ANC) shirweynihii ANC ee bishii December 2017. sidoo kale waa Guddoomiyihii hore ee Guddiga Qorshaynta Qaranka,  kaas oo ka masuul ah qorsheynta istaraatiijiyadeed ee mustaqbalka waddanka, iyada oo hadafkeedu yahay in lagu soo dabaalo Koonfur Afrika "hareeraha guud ee ujeedooyinka iyo mudnaanaha si loo hormariyo muddada fog "
Waxaa loogu yeeraa gorgortan xirfad leh  iyo istaraatiijiyaal  kuwaas oo u shaqeynayay sida madaxwaynaha ANC ee wada xaajoodka muddada koonfur Afrika ee ku aaddan dimuqraadiyadda  Ramaphosa waxa uu dhisey midowga ugu weyn ee ugu awoodda badan dalka oo dhan - Ururka Shaqaalaha Qaranka ee Miisaaniyadda (NUM).  Waxa uu door muhiim ah ka ciyaaray, Roelf Meyer oo ka tirsan Xisbiga Qaranka, intii lagu jiray wada xaajoodkii lagu soo afjari lahaa nabadgelyo xumida iyo in uu waddanka u hoggaamiyo doorashadii ugu horreysay ee dimuqraadiyadeed ee April 1994-kii. Ramaphosa wuxuu ahaa doorashada Nelson Mandela ee madaxweynaha mustaqbalka.  Ramaphosa waxaa loo yaqaanaa ganacsade, qiimaha lagu qiyaasay wuxuu ka sarreeyaa R6.4 bilyan oo doollar ($ 550 milyan) tan iyo 2018, oo leh 31 guri (10) iyo lahaansho hore loo leeyahay ee shirkadaha sida McDonald's South Africa, guddoomiyaha guddiga MTN iyo xubin ka mid ah guddiga Lonmin.
Inkasta oo uu shahaadadiisa astaamihiisa u yahay mid muhiim ah oo ka mid ah waddankiisa ku-meel-gaadhka ah ee dimuqraaddiyadda, haddana waxaa lagu dhaleeceeyay dhaqdhaqaaqiisa ganacsi     inkastoo uusan waligiis loo xukumin sharci daro waxqabadka mid ka mid ah muranadaas. Ganacsiga khilaafaadka ah waxaa ka mid ah wadashaqeyn la leh Glencore  iyo eedeymaha ah in ay si sharci darro ah uga faa'iideystaan ​​heshiisyada dhuxusha Eskom oo si adag u diidey,    [Globor] wuxuu Glencore ku jiray ficillada guud ee ganacsiga ku lug leh Tony Blair Bariga Dhexe; iyo shaqadiisa ku saabsan guddiga agaasimayaasha Lonmin intii ay qaadatay jawi firfircoon marka Marikana ay ka dhaceen dhismaha Lonmin ee dhismaha Marikana. 15kii Agoosto 2012 waxa uu ku baaqay tallaabo ka dhan ah weerarrada maraakiibta ee Marikana, kaas oo uu ugu yeeray "dambi culus" oo loo baahan yahay "ficil wada jir ah" in la qaado.  Wuxuu mar kale qirtay in uu ka qoomameeyay ficilkiisa ku lug lahaa falka wuxuuna sheegay in laga yaabo in laga fogaadey haddii qorshooyinka kala-guurka ah la sameeyay ka hor inta uusan shaqo-joojin jirin 
Wuxuu ka tirsan yahay jinsiyadda Venda iyo madaxweynihii koowaad ee Koonfur Afrika ee kooxdaas
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyril_Ramaphosa&oldid=195351"